ပြင်သစ်လေကြောင်းပျံသန်းမှု ၄၅၉၀ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြင်သစ်လေကြောင်းပျံသန်းမှု 4590 ။
အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာများကဓာတ်ပုံ Concorde ၏လောင်စာအကြံပေးအဖွဲ့ကိုမီးရှို့အကြံပြုထားသည်။ ပေါက်ကွဲမှုခင်မှာ
ဇူလိုင်လ 25 2543 ။
မာကု Ness ပြင်သစ် ။
113 (မြေပြင်4ရက်နေ့တွင် 109 လေပေါ်) ။
ခ AC / လေကြောင်း Patil အောင် Concorde ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Charles de Gaulle ။
ပြင်သစ်လေယာဉ် ၄၅၉၀ ခဲ့မတော်တဆနှင့်အတူလေကြောင်းလိုင်း ပြင်သစ် ပေါ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ။ အဆိုပါတယ္။ ၂၅၄၃ ခရီးကနေ ပဲရစ်မြို့ မှ နယူးယောက် ဖြင့်လေယာဉ် Concorde
နေစဉ်လေယာဉ်ပျံပျံသန်းခဲ့သည်ရာရှိ conning မျှော်စင်၊ပျံသန်းအသိအလေယာဉ်မှူးကမီးအဆုံးမှာအစက်အမောင်းပြီးတော့အကြောင်းကြားအသိအတူပြဿနာများအင်ဂျင်နံပါတ် ၁ အခြားများ ၄ စက္ကန့်အကြာတွင်ရှေ့ပြေးခဲ့သည်အသိပေးအကြောင်းပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူအင်ဂျင်အရေအတွက်ကို ၂ နှင့်အတူမီးစက္မြည်အတွက်လေယာဉ်ကိုမောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ရောက်စေဖို့စက်ဆင်းသွားလာအဆိပ္၊အနီးအနားမှာလေယာဉ်ကိုယ်အမြန်နှုန်းဖြောင့်ချအလေးအနက်မီးသတ် ၁၁၃ လူအဖြစ်ခရီးသည် ၁၀၀ သင်္ဘောသား ၉ လူ၊ ဒီအတွက်ဟိုတယ် Concorde နှုန်းထား၊အခြားလူ ၄
ကနေရလဒ်တွေကိုအများစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြောင်းကောက်ချက်ချခြင်း၏အကြောင်းရင်းအကျအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကျွတ်ထွက်၏လေယာဉ် -၁၀ အ က်ြန္းၾကာင္းလိုင္း ၊ပျံတက်မီက ၄ မိနစ်လည္တိုင္းအတူတစ်ဦးရော်ဘာဘီး၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ် Concorde။ ရှိန်မြှင့်နေစဉ်အဖြည်းဖြည်းဘီးတာယာပန္သူမ်ားအပိုင်းပိုင်း၏ယာပျံပယ်ပျက်ကျကြံပေးနှင့်လျှပ်စစ်နှင့်မီးတောက်များ။
လုံခြုံရေးအေဂျင်လေကြောင်းပြီဆိုင်းငံ့ Concorde လေကြောင်းခရီးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးထွက်ရှာပါ၊အကြောင်းရင်းများနှင့်ပြုပြင် Concorde ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်မတော်တဆမှုပြီးနောက်၊လုပ်ဆောင်လေယာဉ်စမ်းသပ်မှုအပေါ် ၁၇ ဇူလိုင်လ။ အဆိုပါတယ္။ ၂၅၄၄ အောင်ပျံနှင့်အတူခရီးသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အပေါ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ။ အဆိုပါတယ္။ ၂၅၄၄ ထိုနေ့ဖြစ်၏ဖြစ်ပျက်မှု အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများ ၁၁။ အဆိုပါတယ္။ ၂၅၄၄
စီးပွားပျက်ကပ်၏အလေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ဖြစ်ရပ်များအပြီး ၉/၁၁ စေလေပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုင်းအ Concorde လေယာဉ်ပျံ၊အားလုံးအတွက်အနှစ်။ အဆိုပါတယ္။ ၂၅၄၆၊ကြောင့်အနည်းငယ်သာရှိသည်နှင့်မြင့်မားကုန်ကျစရိတ်များ
Final report from Bureau d'Enquêtes et d'Analyse Archived 26 October 2015 at the Wayback Machine.
Crash report(PDF) Archived 26 March 2009 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြင်သစ်လေကြောင်းပျံသန်းမှု_၄၅၉၀&oldid=623966" မှ ရယူရန်